Tafika masina ataon'ny fiangonana ny 27 Jolay 2007, tarihin'ny Vaomieran'ny Aim-panahy – FJKM Ambavahadimitafo Tafika masina ataon'ny fiangonana ny 27 Jolay 2007, tarihin'ny Vaomieran'ny Aim-panahy |
Tafika masina ataon'ny fiangonana ny 27 Jolay 2007, tarihin'ny Vaomieran'ny Aim-panahy
Ny fiofanana fanaon’ireo rehetra mpiantafika dia isaky ny asabotsy, manomboka amin’ny 7 ora sy sasany ka hatramin’ny 9 ora. Ny fiofanana efa nofaritany, ka hiantsoana ireo rehetra mpandray anjara rehetra (mpiantafika, mpikarakara ny sakafo sy ny kojakoja hafa…) dia ny ASABOTSY 07 SY 14 JOLAY 2007, manomboka amin’ny 8 ora sy sasany ka hatramin’ny 11 ora maraina.
Manomboka ny ZOMA 27 JOLAY 2007 ny tena asa hitsidihina ireo tokan-trano hizarana ny Tenin’Andriamanitra. Efa notiliana dieny mialoha ireo tokan-trano manana olana eo amin’ny mpianakavy, ny Ray, ny Reny na ny zanaka, noho ny antony maro samy hafa indrindra ateraky ny fisotroana zava-pisotro mahamamo, sy ny fifohana zava- mahadomelina.
Ireo antony roa ireo no tena hita fa miteraka fikorontanana eo amin’ny fianakaviana, raha ety amin’ny faritra ambony ety no resahina (Ambanidia ka hatrety Ambavahadimitafo).
Ny anjaran’ny Tafika Masina, dia ny mitory an’i Jesoa Kristy, fa Andriamanitra no tena mampiova fo ny tsirairay. Ao amin’ny AKANY RALIBERA Daniel, ireo mpiantafika ireo no mitoby hatramin’ny faha-4 Aogositra 2007.
Miara-monina sy miara-miaina izy ireo, ary indrindra miara-miombom-bavaka mangataka ny Herin’ny Fanahy Masina ahatomombana ny asa iantsoroana.
Marihina fa ireo sampana rehetra ato amin’ny FJKM Ambavahadimitafo, dia hifandimby hikaraka ny sakafon’ireo mpiantafika, mandritry ny fotoana rehetra hiasany.
Amin’ny fotoam-pamaranana, ny ZOMA 03 AOGOSITRA, dia hisy ny fotoampivavahana hanasana indray ireo rehetra nandray anjara mivantana na an-tselika, na amin’ny fomba inona na amin’ny fomba inona, izay hatao ao amin’ny Akany ihany.